Kohler Anotora Inonyatso kuzivikanwa Smart Bathroom Kambani KuDare Kune Kupfuura $ 1.4 Mamirioni Mukukuvara
musha / Blog / Kohler Anotora Inonyatso kuzivikanwa Smart Bathroom Kambani KuDare Kune Kupfuura $ 1.4 Mamirioni Mukukuvara
2020 / 10 / 14 kupatsanuraBlog 893 0
Munguva pfupi yapfuura, Kohler (China) Investment Co v. Zhejiang Weiwei nemamwe mabhizinesi mazhinji anotaridzika patent yekutyora kesi pakutanga akatonga achitsigira Kohler.
Muna 2017, Kohler (China) Investment Co. Ltd. akamhan'arira Zhejiang Weiwei Electronic Sanitary Ware Co. Ltd. uye Shanghai Weiwei Electronic Sanitary Ware Co. Ltd. uye Taizhou Yijia Technology Co. Ltd. uye Beijing Jingdong Sanlitu E-commerce Co. Ltd Kukanganisa kwekugadzira patents.
Nyaya iyi yakaitirwa pachena munaGunyana 10, 2019, kuBeijing Intellectual Property Court. Kohler akadaro mudare redzimhosva, Zhejiang Weiwei, Shanghai Weiwei pasina mvumo yemumhan'ari, pamwe chete kugadzira, kutengesa, kuvimbisa kutengesa mhando V9-B, V9-C chimbuzi chakakanganisa Kohler ichiri munguva yekudzivirira patent yeZL201330193853.8, zita ye "chimbuzi" patent dhizaini, Jingdong yeakataurwa pamusoro apa Mufambiro unopa e-commerce chikuva, uye IKEA kutengesa uye kuvimbisa kutengesa zvimbuzi zveV9-B uye kuvimbisa kutengesa zvimbuzi zveV9-C pasina mvumo yemumhan'ari zvakare kukanganisa chepamutemo.
Kohler akakumbira dare kuti riraire Zhejiang Weiwei naShanghai Weiwei kuti vasiye zvekugadzira, kutengesa, vachivimbisa kutengesa zvigadzirwa zvinokanganisa, uye nekuparadza zvese zvinokanganisa zvigadzirwa uye akakodzera mafomu ekugadzirwa kwezvinhu zvinokanganisa. Panguva imwechete iyo Weiwei anopfuura makumi maviri ezvitoro akatengesawo zvinokanganisa zvigadzirwa, saka kurasikirwa kwehupfumi uye zvine musoro zvematareji mari inosvika 14,208,850 yuan Yayo inokwana 420,850 yuan yemitengo inonzwisisika yematare, kusanganisira mazana mana emamiriyoni euan emari yemagweta, notari fizi 400,000 yuan. Uye zvakare, Ikea akarairwa kubhadhara 20,850 yuan yekurasikirwa nehupfumi uye nemutengo unodhura, kusanganisira 620850 yuan pamitengo inonzwisisika, kusanganisira mazana mana ezviuru yuan yemari yemagweta uye 420,850 yuan yemari yekunyora.
Zhejiang Weiwei, Shanghai Weiwei akanongedzera mukudzivirira, zvigadzirwa zvinokanganisa uye patent iri kutaurwa, haina kufanana kana yakafanana, kwete muchiyero chekudzivirira patent iri kutaurwa, kunyangwe kana zvigadzirwa zvinokanganisa zvikawira munzvimbo yekudzivirira patent iri kutaurwa, mumhan'ari anoda mari yakawandisa, kumbira dare kuti rirambe zvese zvinotaurwa nemumhan'ari.
IKEA yakataura kuti yaibvumirana nekudzivirirwa kwaZhejiang Weiwei naShanghai Weiwei, uye ikati zvigadzirwa zvinokanganisa zvinotengeswa neIEA zvine masosi emutemo, hazvifanirwe kutakura mutoro, nekudaro, kumbira dare kuti rirambe zvese zvinotaurwa nemumhan'ari.
Mushure mekunzwikwa, Beijing Intellectual Property Court yakabata kuti iyo patent ichiri panguva yekutendeseka, uye zvigadzirwa zvinokanganisa uye zvigadzirwa zvinokanganisa pakuonekwa kwakawanda kufanana, Zhejiang Weiwei, Shanghai Weiwei mudare redzimhosva akanzwa kuitisa kwayo kugadzirwa , kutengesa, kuvimbisa kutengesa izvo zvinokanganisa zvigadzirwa, nokudaro zvichiita kutyora kodzero dzepamutemo dzinofarirwa naKohler, huchava nemutoro unoenderana wevagari. IKEA yakanga isina mhosva yekuzviisa pasi, uye haina kuda kutakura chisungo.
Dare rekutanga rakaraira Zhejiang Weiwei naShanghai Weiwei kuti varegedze kugadzira, kutengesa uye kuvimbisa kutengesa zvinhu zvinokanganisa, uye Taizhou Ikea kuti aregedze kutengesa uye kuvimbisa kutengesa zvigadzirwa zvinokanganisa, ndokuramba chikumbiro chaKohler chekuparadza zvese zvinokanganisa zvigadzirwa. uye akafanana anoumba. Panguva imwecheteyo yakaraira Zhejiang Weiwei, Shanghai Weiwei muripo kune mumhan'ari Kohler (China) Investment Company Limited kurasikirwa kwehupfumi kwe200,000 yuan, 60,850 yuan mumatare emitengo. Uye bhara 1400 yuan yemhosva yekutambira mari.
Pakapfuura :: Iyi Sarudzo Yemakabhati Makabati, Usambozvidemba Kuti Uitenge! Zvadaro: 4.95m2 Maitiro eScandinavia, Iri Yekugezera Yevaviri Vaviri Iri Kunyanya Kushamisa Kupfuura Iyo Kamuri Yekugara!